IziCwangciso eziPhambili zoNonophelo lweMithi ukuze zihlale ziphile
Izindlela zokuKhula umthi ophilileyo
Kukho izinto ezithile umnikazi womthi kufuneka azi ukuba kugcinwe imithi enempilo kwaye kwimeko efanelekileyo kakhulu. Funda ezi nkcukacha zokunakekelwa komthi kwisiseko esiphezulu sokugcina umthi onempilo phezu kwendalo yakhe yemvelo kunye nobungakanani bendalo.
Nciphisa Umthi wakho
Isiqu somthi asizange senziwe ngenjongo yokulimaza umthi. Ukubamba iqhele ngokuqhelekileyo kwenziwa ngothando kunye nomnqweno wokukhuthaza ukukhula kwengcambu kunye nokukhusela i-trunk nokukhusela umthi omncinci kwingozi. Yintoni abanye abavelisi bomthi abangayiqondiyo, kunokuba bancede umthi ube neengcambu kunye nokukhula kwe-trunk, ukugqithiswa komthi okungafanelekanga kufaka indawo yenkxaso encedisayo kunye nenkqubo engcambu kunye nenkxaso engumzekelo eyenza ukuba umthi ubeke ubuncwane bawo ekukhuleni kodwa ungakhuli. Kaninzi "
Ukutshintshwa kwesihlahla sakho
Umgadi wase-Gardener utshintshela umthi omncinci (Prunus) kwindawo entsha, ngoSeptemba. (URichard Clark / Getty Images)
Abanini bomthi bahlala befuna ukufuduka okanye ukutshintshela imithi esuka kwii-nursery okanye ngaphakathi kwendawo. Imithi yasemhlabeni ingaba yatsalwe kakhulu okanye isongela ukukhupha indawo ekhoyo. Ubukhulu bubaluleke kakhulu ekutheni ukutshintshwa. Umkhulu umthi, kunzima ngakumbi ukutshala.
Khusela i-CRZ yomthi
Uluhlu oluyimpembelelo. (I-Athene-Clarke County Community Tree Programme, Georgia)
Ngaphambi kokuba uqalise iphrojekthi ye-mulching, qhelana nommandla wengcambu ebalulekileyo (CRZ) okanye ummandla wokukhusela umthi. Lo mmandla uchazwa ngokubanzi njengommandla phantsi komthi kunye nokuphuma kumbhobho walo. Ukuphucula iimeko kule ndawo yokukhusela kuya kubangela iintlawulo ezinkulu zempilo emthini.
Umlenze wakho Umthi
Ukuqhafaza into enenzuzo kakhulu umninikhaya angayenza kwimpilo yomthi omncinane. Izilwanyana zixhobo ezibekwe kumhlaba womhlaba ukuphucula isakhiwo somhlaba, amanqanaba e-oxygen, ukushisa nokufumaneka kwamanzi. Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo, i-mulch inokunika imihlaba ebonakalayo, ebonakala kakuhle.
Ukutshala Umthi Wakho
Umgquba. (ERNESTO BENAVIDES / Getty Images)
Ngokufanelekileyo, imithi ekhulayo kufuneka ifakwe umthamo kulo nyaka. Ixabiso elikhulu kufuneka lisetyenziswe ngethuba lentwasahlobo nakwiinyanga zasehlotyeni. Izicelo ezincinane zokukhanya ngonyaka zikhethwa njengoko umthi ukhula. Kaninzi "
Yilungise Umthi Wakho
(Jupiterimages / Getty Izithombe)
Ukuprintwa kubalulekile ekuphuhliseni umthi ngesakhiwo esomeleleyo kunye nefom efunwayo. Nazi iindlela ezininzi ezibonisa indlela yokucwangcisa imithi yakho. Kaninzi "
Ukuthintela uMonakalo weHlabathi kunye neSiqithi kwiMithi
Ngokuqhelekileyo iintlobo zeBrittle zithatha i-icing enzima emva kwesibhakabhaka sasebusika. Uninzi lwezilwanyana, iipopporri ezininzi zinyani, iimapula zesilivere, iibhoksi, iilum-willows kunye ne-hack-berries zihlobo zemithi ezingenakukwazi ukusingatha ubunzima bezitho zomlenze ezinqabileyo ze-ice slurry. Funda indlela yokukhetha nokulawula imithi yokumelana neqhwa nekhephu. Kaninzi "
Ubusika wakho Umthi
Imithi yokuwa iqala isigaba sabo esiqhekezayo. Imithi ingabonakala ingasebenzi kodwa inyaniso kukuba kuyadingeka ukuba i-winterized-ikhuselwe kwaye igcinwe ukuba ihlale iphilile, ikhululekile kwizifo kunye nezinambuzane. Kaninzi "
Ukubetha Umthi Unokulimaza!
Indlela yokwakha i-Quarter Ripe Ramp Ramp
Isizathu sokuba Ufanele usebenzise imibala yeNdalo yoMthendeleko weHoli
Inkcazo kunye neMimiselo yokuKhutshwa koKhuseleko
Ukuhamba kweNgesi kuphela
Ubani uAlbert Einstein?